M/weyne Shariif iyo wafti uu hoggaaminayo oo si weyn loogu soo dhaweeyey Garoowe. – Radio Daljir
M/weyne Shariif iyo wafti uu hoggaaminayo oo si weyn loogu soo dhaweeyey Garoowe.
Garoowe, Aug, 28 – Waxaa daqiiqado ka hor ka soo dagay magaalada Garoowe ee xarunta dawladda Puntland M/shariif iyo wafti ballaaran oo uu hoggaaminayo, halkaas oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen madaxda dawladda Puntland uu horkacayo M/weyne Faroole iyo waftigii R/wasaare Gaas oo horay u joogay Garoowe.
Labada M/weyne ayaa salaam sharaf ka qaatay boqolaal ka tirsan ciidamada Puntland oo ku diyaarsanaa garoonka, waxaa magaalada isugu soo baxay weyne aad u badan oo wata sarirada M/weyneynayaasha Somaliya iyo Puntland.
Waxaa isna saaka soo gaaray magaalada Garoowe Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Austine Mahiga, waxaana arintani muujinaysa in qodobka ugu way nee diiradda la saarayo uu yahay shirka wadatashiga Soomaaliya.
Wixii ka soo kordha kale soco Daljir.com
M/weyne Shariif oo laga sugayo Garoowe. Iyo diyaargaraw soo dhawayn ah oo socda.
Garoowe, Aug, 28 – M/weynaha dawladda Federalka ah ee Soomaaliya Sh. Shariif Sh. Axmed iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa la filayaa inay goordhaw ka soo dagaan magaalada Garoowe ee xarunta dawladda Puntland, waxaana ka socda Garoowe hadda diyaargaraw aad u ballaaran oo lagu soo dhawaynayo M/weyne Shariif.
Ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey, wadooyinka magaalada waxaa lagu daadiyey ciidamo bileys ah, gadiidka dadweynaha si kooban ayaa loo hakiyey, hareeraha wadada laamiga ahna waxaa dhooban dadweyne doonaya inay ka qaybgalaan soo dhawaynta M/weyne Shariif, waana arrinta ugu wayn ee maanta laga hadalhayo deegaanada Puntland gaar ahaan Garoowe.
Ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dawladda Puntland iyo tan federalka oo la xiriira safarka M/weynaha iyo waxa uu ku saabsan yahay, balse warar hordhaca oo Daljir heshay ayaa sheegaya in qodobada ugu waawayn ee mas?uuliyiinta labada dhinac ay ka xaajoonayaan ay tahay shirka wadatashiga Soomaalida ee filayo inuu ka furmo Muqdisho iyo adkaynta xiriirka labada dhinac oo mar gaaray meeshii ugu liidatay.
Waxaa horay Garoowe u joogay R/wasaare Gaas iyo xubno wasiiro ah oo la socda, waxayna u egtahay in r/wasaaruhu uu kaalin firfircoon ka cayaaray safarka M/weyne Shariif ee Garoowe.
Safarka M/weyne Shariif ee la filayo inuu maanta ku yimaado magaalada Garoowe ayaa noqonaya mid taariikhi ah, wuxuuna sidoo kale noqonayaa kii ugu horreeyey ee uu ku yimaado Puntland tan iyo intii uu xilkaasi qabtay.